I-GTA: Isan Andreas remake on Unity: izibuyekezo ezintsha ziyatholakala | Kusuka kuLinux
Isaka | | I-GNU / Linux, Imidlalo, Izaziso
I-GTA: San Andreas ingenye yemidlalo yevidiyo ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Uchungechunge lonke ebelinabadlali abaningi abakhangwa yileli zwe elivulekile edolobheni elikhulu lapho ungenza khona konke okufunayo, ngaphezu kokuqedela uchungechunge lwemishini. Kepha kuyo yonke i-saga, mhlawumbe uSan Andreas ubengomunye wabathandwa kakhulu. Ngakho-ke, onjiniyela banesifiso sokubuyisa lo mdlalo phambili.
Ku-LxA besivele sikhulume ngalesi senzo, umfana owedlule, ukwethulwa okususelwa kukho injini entsha yehluzo le-Unity, iyahambisana nezinkundla zeLinux njengoba kufanele wazi futhi uma usifunda. Yebo, le remakeource evulekile ebizwa ngeSanAndreasUnity iyahambisana nezinkundla eziningi (cross-platform) futhi inokukhishwa okusha ngezibuyekezo ezithokozisayo ezithuthukisa umsebenzi oyisisekelo obusukhona ...
Kulokhu kukhishwa kwakamuva uzothola okulandelayo izindaba:
Ukusekelwa kwezinhlelo zefayela ezibucayi, okungukuthi, ezithinta amacala, njengoba kunjalo nge-FS yeLinux.
Abasebenzisi beLinux abasadingi ukwenza noma ikuphi ukumiswa njengoba kwakunjalo ekukhishweni kwangaphambilini, umdlalo usungaphela ebhokisini.
Ukuguqulwa kwemibhalo ukuze umdlalo ungaziphathi ngendlela ehlukile ekuhlanganisweni ngakunye.
Amaphakheji wempahla angasetshenzisiwe afakwe ku-Unity asusiwe.
Ihambisana ngokuphelele ne-SFX.
Isikhathi semoto esingcono nezinguquko ezithile ezenziwe.
I-GXT ingangeniswa (ikhutshazwe okwesikhashana)
Lungisa amaklayenti athola ugaxekile
I-FPSCounter yenziwe kahle, ukuthungwa kuvuselelwa kanye kuphela ngohlaka ngalunye
Okunye ukuthuthukiswa kokuqhafaza nokulungiswa kwamaphutha okuningi.
Uma ufuna ukufunda ulwazi oluthe xaxa, uyilande noma uhlanganyele kule phrojekthi, ungaya kufayela le- Iwebhusayithi yeGitHub yale phrojekthi yeSanAndreasUnity. Futhi jabulela uma usithandile lesi sihloko!
Ngendlela, into ephakamisa ukungabaza. Uma ufuna ukudlala uzodinga ikhophi ye-GTA: San Andreas. Ukuphela kwento iphrojekthi eye yathatha isikhundla sayo yinjini yehluzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » I-GTA: Isan Andreas yenza kabusha kubumbano: izibuyekezo ezintsha ziyatholakala